I-Bungalow de Feliday - I-Airbnb
I-Bungalow de Feliday
Tlayacapan, Morelos, i-Mexico
I-ifulethi ephelele ibungazwe ngu-Gladys
U-Gladys Ungumbungazi ovelele
Ifulethi elikhulu ezintabeni ngokubuka isigodi nezintaba-mlilo iPopocatepetl kanye ne-Ixtazihuatl eMorelos.Izingadi eziluhlaza, ichibi kanye neJacuzzi. Indawo ebonwa njengendawo yokugcina amandla emvelo, eduze nedolobhana elincane elinamasiko ase-Mexican.
I-Tlayacapan iye yaqashelwa yi-UNESCO, njengedolobha elinomlingo ngenxa yokunotha kwayo okukhulu ngokomlando namasiko.Kuyidolobha okuthi naphezu kokuba seduze kweDolobha laseMexico nezinye izikhungo zasemadolobheni, lihlala lingamasiko ashiwo emikhosini, amaphathi endawo ahlenga umculo nemidanso yakudala.
Inama-chapel angama-25 kusukela ngekhulu le-16 kanye nesigodlo esigcina inkumbulo yamaqiniso amakhulu omlando ngesikhathi seKoloni kanye neminyaka eyalandela.
Abantu basedolobheni banemfudumalo futhi banobungane okwenza uhlale ujabule futhi umuhle.
Le ndawo iyindawo yangasese emagqumeni amagquma futhi iseduze kakhulu nendawo yomuzi, iyindawo ekukhuthaza ukuba uhambe; isimo sezulu sihle, libalele njalo futhi izinga lokushisa limnandi.
Kule ndawo sinikeza ukunakekelwa okukhethekile ezivakashini zethu, sifuna uzizwe usekhaya, isibonelo ungakwazi ukujikeleza ngokukhululekile endaweni evulekile, sikunikeza ama-grill, ihhavini lobumba lokubhaka isinkwa kanye / noma ama-pizza.
Sikuqondisa ngezindawo ongadla kahle futhi unempilo nasemadolobhaneni athakazelisayo azungeze i-Tlayacapan ongawavakashela.
Kule ndawo sinikeza ukunakekelwa okukhethekile ezivakashini zethu, sifuna uzizwe usekhaya, isibonelo ungakwazi ukujikeleza ngokukhululekile endaweni evulekile, sikunikeza ama-grill…
UGladys Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Tlayacapan namaphethelo